Inona no atao hoe VPN? Ahoana ny fiasan'ny VPN sy ny antony ilanao azy | la-manette.com
INONA NY VAOVAO
FITSARANA SY FAMETRAHANA
SOSO-KEVITRA SY TETIKA
IZA IREO CONTROLLER HIFIDY
Inona no atao hoe VPN? Ahoana ny fiasan'ny VPN ary nahoana ianao no mila izany
1 décembre 2021 feh JEAN-MICHEL CAPPIN
Ny tambajotra tsy miankina virtoaly, na VPN, dia fifandraisana misy miafina izay miaro ny fifandraisanao amin'ny Internet sy ny fiainanao manokana an-tserasera. Manao izany izy amin'ny alàlan'ny famoronana tonelina misy miafina izay handefasana ny angonao. Rehefa ampiasaina ny serivisy VPN dia manafina ny adiresy IP tena izy ary miaro anao amin'ny tambajotram-bahoaka.
Matetika, ny teknolojia tambajotra tsy miankina virtoaly dia ampiasaina hananganana tambajotra tsy miankina amin'ny Internet mba hizarana ny loharanon'ny intranet orinasa amin'ireo mpampiasa lavitra sy biraon'ny orinasa hafa. Afaka mampiasa VPN ihany koa ny olona mba hidirana amin'ny tambajotra an-tranony avy lavitra.
Ny VPN dia toy ny efitranonao manokana amin'ny Internet, izay ahafahanao mihantona tsy misy fitsabahan'ny olon-kafa. Ny sasany amin'ireo VPN karama malaza indrindra dia ny PIA, sy ny hafa. Izy ireo dia mamela anao miditra amin'ny tambajotra an-tranonao na ny tambajotran'ny orinasanao, na dia any amin'ny faritra hafa amin'izao tontolo izao aza ianao.
Serivisy VPN malaza
NordVPN sy Private Internet Access, ireo serivisy rehetra ireo dia malaza amin'ny kalitaon'ny serivisy sy fiarovana atolony amin'ny fifandraisany manokana / azo antoka.
Cyber ​​​​Ghost, Surf Easy, Tunnel Bear dia serivisy VPN maimaim-poana vitsivitsy azonao ampiasaina raha te hitsitsy vola ianao. Saingy tsy maintsy ho afa-po amin'ny endri-javatra vitsy kokoa ianao, fetran'ny downloading na dokam-barotra. Ary koa, ireo serivisy maimaim-poana ireo dia tsy afaka mandresy ny serivisy karama, mariho izany. Jereo koa ny torolàlana lalindalina momba ny fifanarahana Black Friday VPN ho an'ny 2021 eto!
Ahoana no fiasan'ny VPN?
Ny fitsipiky ny fiasan'ny tambajotra tsy miankina virtoaly (VPN) dia tsy sarotra takarina, na dia izany aza. Alohan'izany dia mila maka hevitra momba ny andian-dalàna ampiasaina hanomezana tambajotra faritra azo antoka ianao.
SSL (Secure Socket Layer) / TLS (Transport Layer Security) : Mampiasa fomba fifampikasohana amin'ny fomba telo izy io mba hiantohana ny fanamarinana mety eo amin'ny mpanjifa sy ny mpizara. Ny fizotry ny fanamarinana dia mifototra amin'ny kriptografika izay misy ny mari-pankasitrahana, izay mitondra tena toy ny fanalahidin'ny kriptografika efa voatahiry amin'ny lafiny mpanjifa sy mpizara, dia ampiasaina hanombohana ny fifandraisana.
IPSec (fiarovana IP) : Ity protocol ity dia afaka miasa amin'ny fomba fitaterana na amin'ny fomba tonelina mba hahazoana antoka ny fifandraisana amin'ny tambajotra virtoaly. Ny fomba roa dia tsy mitovy amin'ny hoe ny fomba fitateram-pitaterana dia tsy misy afa-tsy ny enta-mavesatry ny angon-drakitra, izany hoe ny hafatra ao anaty angon-drakitra ihany. Amin'ny lafiny iray, ny mode tunneling dia mamadika ny angon-drakitra rehetra halefa.
PPTP (Protocole Transfer Point-To-Point) : Mampifandray mpampiasa iray any amin'ny toerana lavitra iray miaraka amin'ny mpizara tsy miankina amin'ny tambajotra VPN izy io, ary mampiasa fomba fanelanelanana ho an'ny asany ihany koa. Ny fikojakojana ambany sy ny fampandehanana tsotra dia mahatonga ny PPTP ho protocol VPN noraisina betsaka. Ny trosa koa dia mandeha amin'ny fanohanana naorina omen'ny Microsoft Windows.
L2TP (Sosona roa tonelina Protocol) : Manamora ny fampidinana ny angon-drakitra eo anelanelan'ny tranokala roa amin'ny tambajotra VPN, izay matetika ampiasaina miaraka amin'ny protocol IPSec, izay manamafy ny fiarovana ny fifandraisana.
Ankehitriny dia manana hevitra ankapobeny momba ny protocols samihafa ampiasaina amin'ny VPN ianao. Hitohy ary hojerentsika ny fomba fiasa. Rehefa mifandray amin'ny tambajotram-bahoaka ianao, ohatra, tambajotra Wifi maimaim-poana any amin'ny seranam-piaramanidina, azonao heverina fa mikoriana amin'ny tonelina lehibe miaraka amin'ny angon'ny mpampiasa hafa ny angonao rehetra.
Vakio ihany koa: Ny fomba tsara indrindra hifandraisana amin'ny Amazon mba hahazoana fanampiana rehefa manana olana amin'ny kaontinao ianao
Na iza na iza te-hitsikilo anao dia afaka mitsikilo mora foana ny packet data anao amin'ny tambajotra. Rehefa miditra ny VPN dia manome tonelina miafina ao anatin'io tonelina lehibe io ianao. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny angon-drakitrao rehetra dia mivadika ho sisa tavela mba tsy hisy hahafantatra azy.
Nahoana ianao no mila serivisy VPN?
Ny fandehanana amin'ny Internet na ny fifampiraharahana amin'ny Internet amin'ny tambajotra tsy azo antoka dia midika fa afaka mamoaka ny mombamomba anao manokana ianao. Noho izany, mba ho azo antoka, VPN dia tokony ho tsy maintsy ho an'izay te-hitandrina ny mombamomba azy.
Ohatra, raha eny amin'ny toerana ho an'ny daholobe ianao ary mampiasa ny WiFi-ny, dia mety hampiharihary ny mombamomba anao saro-pady ianao rehefa mivezivezy amin'ny Internet. Ireo mpampiasa amin'ny tambajotra iray ihany dia afaka miditra amin'ny angona rehetra alefa any.
Amin'ny alàlan'ny fampiasana VPN, mijanona ho voarakotra sy tsy fantatra anarana ny angonao, izay manilika ireo antoko fahatelo tafiditra.
Ahoana ny fiarovan'ny VPN anao amin'ny Internet
Araka ny nohazavainay etsy ambony, ny VPN dia manisy encryption ny angon-drakitrao mba hahafahanao mijanona tsy mitonona anarana amin'ny mpitsikilo na mpitsikilo an-tserasera. Amin'ny fampiasana VPN, tsy misy afaka miditra amin'izay ataonao amin'ny tambajotram-bahoaka sy ny tambajotra an-trano.
Ny encryption no fomba tsara indrindra hijanonana tsy mitonona anarana an-tserasera, ary ny tsiambaratelon'ny angon-drakitra dia olana lehibe ihany koa.
Misy dingana telo amin'ny fametrahana fifandraisana VPN
Fanamarinana: Amin'ity dingana ity, ny fonosana angon-drakitra dia voarakitra voalohany, izany hoe, fonosina anaty fonosana hafa misy lohapejy sy singa hafa. Izany rehetra izany dia ahafahana manafina ny mombamomba ny fonosana data. Ankehitriny ny fitaovanao dia manomboka ny fifandraisana amin'ny alàlan'ny fandefasana fangatahana Hello amin'ny mpizara VPN, izay mamaly amin'ny fanekena ary mangataka ny mombamomba ny mpampiasa hanamarina ny maha-azo itokiana ny mpampiasa.
Famoronana tonelina: Rehefa vita ny dingana fanamarinana, izay azontsika lazaina, dia noforonina ny tonelina an-tsaina izay manome fifandraisana mivantana amin'ny teboka manerana ny aterineto. Afaka mandefa izay angona tadiavintsika amin'ny alalan'ity tonelina ity izahay.
Fanafenana: Rehefa vitantsika ny namorona ny tonelina dia afaka mamindra ny fampahalalana rehetra tadiavintsika izy io, saingy mbola tsy azo antoka io fampahalalana io raha mampiasa serivisy VPN maimaim-poana isika. Izany dia satria misy olona mampiasa azy io koa. Noho izany dia amboarinay ny fonosana angon-drakitra alohan'ny handefasana azy ireo amin'ny tonelina, manakana ny mpampiasa hafa tsy hihaino ny fonosanay. Tsy ho hitan'izy ireo afa-tsy ny fako tsy fantatra amin'ny angon-drakitra mivezivezy ao anaty tonelina.
Ankehitriny, raha te-hiditra tranonkala iray ianao, ny fitaovanao dia handefa ny fangatahana fidirana amin'ny mpizara VPN, izay handefa ny fangatahana amin'ny tranokala amin'ny anarany ary handray ny angona avy aminy. Avy eo ny tranokala dia hamindra izany data izany amin'ny fitaovanao. Eto, ny tranokala dia hihevitra fa ny mpizara VPN no mpampiasa. Tsy hahita soritra ny anao na ny fitaovanao amin'ny maha-mpiasa azy izy, raha tsy mandalo ny mombamomba anao manokana amin'ny fifandraisana. Ohatra, haseho ny mombamomba anao raha miditra amin'ny tranokalan'ny tambajotra sosialy toa ny Facebook na Twitter ianao amin'ny fampiasana fifandraisana VPN.
Fampiasana VPN: Inona no Ataon'ny VPN?
Ny fifandraisana VPN dia manome fidirana mivantana amin'ny tambajotran'orinasa ho an'ny mpampiasa iray ivelan'ny fandrakofana ara-jeografika ny tambajotra. Raha ny lojika, ny mpampiasa lavitra dia miditra ho toy ny mpampiasa mahazatra izay ao amin'ny campus orinasa.
Vakio ihany koa: Esory lahatsoratra avy amin'ny rakitra PDF sy sary
Izy io koa dia manampy amin'ny fanomezana tontolon'ny tambajotra tsy misy olana ho an'ny orinasa manana birao manerana izao tontolo izao. Noho izany, dia miteraka fifampizaràna tsy tapaka ny loharanon-karena amin'ny alàlan'ny fandalovana ireo sakana ara-jeografika.
Ny fampiasana hafa an'ny VPN dia ahitana ny fidirana amin'ny serivisy amin'ny Internet izay tsy hita any amin'ny firenena na faritra iray manokana, ny fidirana amin'ny atiny voasivana, na raha te hijanona tsy mitonona anarana fotsiny ny mpampiasa iray ao amin'ny tranonkala.
VPN amin'ny Android sy iOS
Azonao atao koa ny manangana fifandraisana VPN amin'ny findainao mandeha eo ambany Android TAOLONA. Izany dia ahafahanao miditra mivantana amin'ny tambajotra manokan'ny orinasanao amin'ny fitaovana Android anao. Ny VPN koa dia manamora ny fanaraha-maso ny fitaovanao, manampy na mamafa angona, ary manara-maso ny fampiasanao ny VPN.
Vakio ihany koa: Ahoana ny fomba hamahana ny Disney Plus na aiza na aiza misy VPN
VPN amin'ny efijery setup iPhone
Toy izany koa, ny fitaovana Apple anisan'izany ny iPhone (iOS) sy nyiPad (iPadOS), dia manana fanohanana naorina ho an'ny tambajotra tsy miankina virtoaly. Afaka mandeha any amin'ny app Settings ianao ary mamorona mombamomba VPN vaovao amin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana omen'ny mpamatsy VPN anao.
Ny VPN dia misy karazany roa indrindra, dia ny tambajotra virtoaly fidirana lavitra sy VPN amin'ny tranokala. Ny karazana faharoa, tambajotra tsy miankina virtoaly amin'ny tranokala, dia manana subtype hafa.
VPN fidirana lavitra
Raha miresaka momba ny fidirana lavitra VPN isika dia miresaka momba ny fanomezana olona iray miditra amin'ny tambajotra manokana efa misy amin'ny Internet. Ny tambajotra tsy miankina dia mety ho tambazotra natsangan'ny fikambanana orinasa misy angona sy fitaovana tambajotra mifandraika amin'ny fikambanana na ny iray amin'ireo tetikasany.
Miaraka amin'ny VPN fidirana lavitra, tsy mila mifandray mivantana amin'ny tambajotran'ny orinasa ny mpiasa iray. Afaka manao izany amin'ny fampiasana ny rindrambaiko mpanjifa VPN ilaina sy ny fahazoan-dàlana omen'ny orinasa.
Ny VPN fidirana lavitra dia tsy natao ho an'ny orinasa ihany; afaka mandray soa avy amin’izany koa ny tsirairay. Ohatra, azonao atao ny manangana tambajotra tsy miankina virtoaly ao an-tranonao ary mampiasa ny fahazoan-dàlana hidirana amin'ny toerana hafa. Amin'izany fomba izany, ny tranokala tsidihinao dia hahita ny adiresy IP an-tranonao fa tsy ny tena adiresy IP anao.
Ary koa, ny ankamaroan'ny serivisy VPN hitanao eny an-tsena dia ohatra amin'ny VPN fidirana lavitra. Ireo tolotra ireo indrindra dia manampy ny olona hanala ny famerana ara-jeografika amin'ny Internet. Ireo famerana ireo dia mety misy noho ny fanakanana tarihin'ny governemanta, na raha toa ka tsy azo idirana amin'ny faritra iray ny tranonkala na serivisy iray.
Ny teny hoe "site", amin'ity tranga ity, dia manondro ny toerana ara-batana misy tambajotra manokana. Antsoina koa hoe LAN-to-LAN na Router-to-Router VPN. Amin'ity karazana VPN ity, tambajotra tsy miankina roa na maromaro any amin'ny faritra samihafa eto amin'izao tontolo izao no mifamatotra ary mamorona tambajotra tsy miankina virtoaly iray ao amin'ny Internet. Misy karazany roa izao ny tamba-jotra tsy miankina virtoaly amin'ny tranokala.
Vakio ihany koa: Ahoana ny fampidinana horonan-tsary YouTube amin'ny biraonao na solosainao?
Site-to-Site Extranet VPN
Mety ilaina ny mampifandray ireo tambajotra orinasa an'ny fikambanana samihafa. Afaka miara-miasa amin'ny tetikasa misy loharanon-karena avy amin'ny fikambanana roa izy ireo. Ireo tambajotra tsy miankina virtoaly noforonina dia fantatra amin'ny anarana hoe VPN extranet site-to-site.
Ny tombony sy ny tsy fahampian'ny VPN
Ny tombony lehibe indrindra amin'ny fampiasana VPN dia ny manolotra fomba mahomby amin'ny famoronana tambajotra tsy miankina tokana raha oharina amin'ny fampiasana tsipika misaraka izay afaka mandoro paosin'ny orinasa. Ny trosa rehetra dia mandeha amin'ny Internet, izay fitaovana ho an'ny fifandraisana VPN tsy tapaka.
Ankoatra ny zavatra tsara rehetra ataon'ny VPN ho antsika, dia manana ny lafiny malemy ihany koa izy. Ny tsy fahampian'ny dingana mirindra hiantohana ny kalitaon'ny serivisy (QoS) amin'ny Internet no tsy fahaizan'ny teknolojia VPN. Ankoatra izany, ny haavon'ny fiarovana sy ny maha-azo itokiana ivelan'ny tambajotra tsy miankina dia tsy takatry ny teknolojia VPN. Ny tsy fifanarahana eo amin'ireo mpanome tolotra samihafa dia manampy amin'ny fatiantoka ihany.
Inona no tokony hotadiavinao amin'ny VPN
Miankina tanteraka amin'ny fomba fampiasanao tambajotra tsy miankina virtoaly izany. Alohan'ny hisafidianana mpamatsy dia manontania tena fanontaniana telo: Haingana ve izany? Hiantoka ny fiarovana ny angonako ve izany? Hanaja ny tsiambarateloko ve izany? Toy izany koa, ireo no antony lehibe tokony hotadiavinao rehefa misafidy mpamatsy VPN.
Ny VPN hatramin'izao dia nanome antsika ambaratonga fiarovana sy tsy mitonona anarana. Vokatr'izany dia afaka manatanteraka izany isika rehefa mizara ny angona tsiambaratelontsika amin'ny Internet. Ny goavan'ny orinasa dia nankasitraka hatrany ny fahamoram-po sy ny tsy fitoviana azony atao amin'ny tambajotra amin'ny fampiasana VPN. Na dia misy fetrany aza, ny VPN dia nihoatra ny nantenainay. Tokony hidera ny teknolojian'ny tambajotra tsy miankina isika noho ny fahombiazan'ny vidiny atolony amin'ny asany.
Izany no momba ny VPN, ny ataony ary ny fomba fiasany hiarovana ny angonay. Raha manana zavatra ampiana momba ny teknolojia VPN ianao dia ampahafantaro anay ao amin'ny fanehoan-kevitra ny hevitrao.
Fanontaniana fréquemment posées
Inona no atao hoe VPN amin'ny teny tsotra?
Serivisy manampy anao hitazona ny angonao sy ny fiainana manokana an-tserasera amin'ny tanana tsara.
Azo antoka ve ny fampiasana VPN?
Eny, azo antoka tanteraka ny fampiasana VPN avy amin'ny mpamatsy azo itokisana.
Ara-dalàna ve ny fampiasana VPN?
Ara-dalàna ny fampiasana tambajotra tsy miankina virtoaly rehefa mijery Internet.
Editor-in-lohan'ny Chez la-manette.com
Jean Michel dia tonian-dahatsoratry ny la-manette.com nandritra ny taona maro izao. Nanomboka nanoratra tao amin'ny Call of Duty izy tamin'ny taona 2018 mba hiovaova amin'ny lalao amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny Fortnite manokana, mba hamerina ny diany amin'ny farany miaraka amin'ny fiverenan'ny CoD amin'ny tampon'ny lalao miaraka amin'ny royale ady malaza izay mifarana amin'ny "faritra. " ary manomboka amin'ny "Ady". Afaka mifandray amin'i Jean Michel ianao amin'ity adiresy ity: [email voaaro]
Lahatsoratra farany nataon'i JEAN MICHEL CAPPIN (jereo ny zava-drehetra)
Kaody Roblox - Lisitry ny kaody fanavotana feno - 17 Janoary 2022
Mila namana ho an'ny Animal Crossing: New Horizons Multiplayer? Zarao eto ny kaody namanao sy ny kaody Dodo! - 11 Janoary 2022
Ny lalao adventure 10 tsara indrindra - 10 Janoary 2022
Inona no atao hoe torrents? Ahoana ny fiasan'ny torrent
Ny router WiFi portable 6 tsara indrindra: Router pocket ho an'ny WiFi eny an-dalana
Leave a comment Ajanony ny valiny
anarana Email tranonkala
Tehirizo ao amin'ny browser ny anarako, ny mailaka ary ny tranoko raha te haneho hevitra manaraka aho.
Hoy ny ekipanay Misaotra!
Ny tranokalanay dia tohanan'ny mpihaino azy. Rehefa mividy amin'ny alàlan'ny rohy ao amin'ny tranokalanay ianao dia mety hahazo komisiona kely tsy misy vidiny fanampiny aminao.
Ny varotra lalao Pokémon tamin'ny 2021 no tsara indrindra ho an'ny andiany hatramin'ny nanombohan'ny volamena sy volafotsy
Paths: Beatrice's Adventure dia lalao safidy sy vokatra ho avy mifototra amin'ny fiainan'ny tovovavy 16 taona, azo alaina amin'ny fidirana aloha ao amin'ny Google Play.
Làlan'ny fiaramanidina 5G: mety ho tratran'ny fifandirana amerikana izay tsy tokony ho tonga amin'ny fotoana mangotraka ny flyers UK | Vaovao siantifika sy teknika
Ny tarika Warpath tsara indrindra zaraina isaky ny kilasy
Netflix's The Cuphead Show dia hanomboka amin'ny volana ho avy
Top 7 fomba hamahana ny andalana farany tsy misy intsony olana amin'ny iPhone
Ny lisitry ny Monster feno sy ny angona Micromon
Maty noho ny kaody andro (Janoary 2022)
Lalao tsara indrindra toa an'i Subnautica
Ny lalao cyberpunk 10 tsara indrindra ho an'ny telefaona sy takelaka Android
Coin Master Free Spins - rohy havaozina isan'andro (Janoary 2022)
Lalao tsara indrindra toa ny Pokemon Snap [Lisitra 2022]
Lalao 5 hilalao amin'ny Pixel 3 na Pixel 3 XL vaovao-nao
RAID: Kaody Shadow Legends havotana (Janoary 2022)
Lalao tsara indrindra toy ny The Sims
Lalao tsara indrindra toa ny XCOM
Lalao Top 7 tsara indrindra mahatonga anao ho hendry kokoa ho an'ny iPhone & iPad (iOS)
Lalao tsara indrindra toy ny Control
Lalao tsara indrindra toa ny sela maty
Lalao tsara indrindra toy ny Tetris
Ahoana ny fanesorana ny enchantments amin'ny Minecraft amin'ny 2022 (Torolalana)
Shaders 10 tsara indrindra ho an'ny Minecraft 1.18 (Janoary 2022)
Lalao tsara indrindra tahaka ny varavaran'ny fahafatesana
Lalao tsara indrindra toa an'i RimWorld [Lisitra 2022]
Lalao tsara indrindra toa an'i Mario Party 2022
Torohevitra sy fika ho an'ny fitsangatsanganana Fortnite!
Fiarovana, tsiambaratelo ary cookies
Iza moa isika
Fampandrenesana momba ny zon'ny mpamorona
ILAY MPANOMPO © -2022
Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bengali Bosnian Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Corsican Croatian Czech Danish Dutch Esperanto Estonian Filipino Finnish French Frisian Galician Georgian German Greek Gujarati Haitian Creole Hausa Hawaiian Hebrew Hindi Hmong Hungarian Icelandic Igbo Indonesian Irish Italian Japanese Javanese Kannada Kazakh Khmer Korean Kurdish (Kurmanji) Kyrgyz Lao Latin Latvian Lithuanian Luxembourgish Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Maori Marathi Mongolian Myanmar (Burmese) Nepali Norwegian Pashto Persian Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Samoan Scottish Gaelic Serbian Sesotho Shona Sindhi Sinhala Slovak Slovenian Somali Spanish Sudanese Swahili Swedish Tajik Tamil Telugu Thai Turkish Ukrainian Urdu Uzbek Vietnamese Welsh Xhosa Yiddish Yoruba Zulu
FIAROVANA, TSIAMBARA ARY COOKIES
Mampiasa cookies ity tranonkala ity hanatsarana ny zavatra niainanao. Heverinay fa tsy maninona ianao amin'ity, fa afaka mifidy ianao raha tianao. Fikirana cookieEKEO ARY TOHIA
Mampiasa cookies ity tranonkala ity mba hanatsarana ny traikefanao raha mivezivezy ao amin'ny tranonkala. Ao anatin'ireny cookies ireny, ireo cookies izay sokajina ho ilaina dia voarakitra ao amin'ny tranonkalanao satria izy ireo dia tena ilaina amin'ny fiasan'ireo fotodrafitrasa fototra ao amin'ny tranonkala. Mampiasa cookies avy amin'ny antoko fahatelo ihany koa izahay izay manampy anay handinika sy hahatakatra ny fomba ampiasanao ity tranonkala ity. Ireo cookies ireo dia ho voatahiry ao anaty navigateur raha tsy miaraka amin'ny fanekenao. Azonao atao koa ny misafidy ireo cookies. Fa ny fisafidianana sasany amin'ireo cookies ireo dia mety hisy fiantraikany eo amin'ny traikefa niainanao.
Tehirizo & Ampiharo